Shil gaari oo geystay qasaaro dhimasho iyo mid dhaawac oo ka dhacay duleedka muqdisho – STAR FM SOMALIA
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Deegaanka Garasbaaley ee duleedka Magaalada Muqdisho, labo ruux ayaa ku geeriyootay Afar kalena waa ay ku dhaawacmeen Shil gaari oo ka dhacay halkaasi.
Gaariga shilka galay ayaa ahaa Caasi/Homy ay saarnaayeen Arday ka timid Jaamacad, wuxuuna ku soo socday magaalada Muqdisho, Xawaaraha gaariga oo saa’id ahaa ayaa keentay inuu ku dhufto Haweenay laamiga goynaysay.
Intaasi kadib ayaa gaariga wuxuu ka baxay wadada, waxaana taasi ay keentay inuu jiiro dad taagnaa laamiga dhinaciisa, halkaasina ay ku dhintaan dad gaaraya labo ruux.
Guddoomiyaha Deegaanka Garasbaaley C/raxmaan Axmed Cali oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay inay u gurmadeen dadka dhaawacmay, halka kuwa meydka ahna uu sheegay inay yaalaan goobtooda.
“Gaari Caasi ah ayuu ahaa oo Jaamacad ka yimid oo Arday siday, marka uu maraayo Weydoow iyo Garasbaaley inta u dhaxeysa ayuu shil galay, Maamo laamiga mareysay ayuu ku dhuftay wadada ayuu ka baxay, kadibna labo ruux oo kale ayaa ku geeriyootay.” Ayuu yiri Guddoomiyaha Garasbaaley.
Dadka ku dhaawacmay Shilkaasi ayaa loo soo qaaday Isbitaalka Madiina, halkaasi oo xaaladooda caafimaad lagu daaweynaayo.
Wadayaasha Gaadiidka ayaa inta badan Xawaare dheereeya ku kaxeeya gaadiidka, iyaga oo ka fekeraya waqtiga, islamarkaana u deg degaya helista fursado kale oo shaqo, taasi oo keenta in gaariga Shil uu galo.